Sida loo tijaabiyo wararkii ugu dambeeyay ee Netflix: Noqo tijaabo | Androidsis
Netflix waa mid ka mid ah adeegyada ugu isticmaalka badan si loo daawado taxane iyo filimmo badan hadda. Waqtigu ka dib, madalku wuxuu soo bandhigayaa horumarro badan, sida mararka qaarkood way wanaagsan tahay in la sii ogaado iyaga ka hor iyo in la tijaabiyo hawlgalka si loo sii wado.
Waqtigaan la joogo waxaa suurtagal ah inaad noqoto tijaabiye Netflix, waad isku dayi kartaa wararkii ugu dambeeyay iyo wax ka sheegida wax kasta, oo ay ku jiraan cayayaanka si loo saxo. Taasi waxay ku dhacdaa codsiyada kale sida WhatsApp, Telegram iyo Netflix ma aysan dooneynin inay ka yaraadaan, maadaama ay u furan tahay bulshada weyn.
Horumariyayaashu waxay ku tijaabin karaan codsiyada saddex siyaabood oo kala duwan, kan ugu horreeyaana waa tijaabinta gudaha, kaliya horumariyeyaasha iyo koox yar oo dad ah. Ta labaadna waa imtixaan xidhan oo lagu soo casuumay iyo tan saddexaadna waa imtixaan furan, halkan qof kastaa wuu ka qaybqaadan karaa.
Netflix wuxuu ku sameeyaa hoosta labaad, tijaabada furan ee Dukaanka Play, laakiin waxaad u baahan doontaa casuumaad si aad u noqotid tijaabiye ka mid ah kumanaanka qof ee jiri doona. Tan awgeed, xiriiriye ayaa lagama maarmaan u ah inuu awood u yeesho inuu soo galo kooxdaas si uu u diro codsiga una bilaabo inuu ogaado dhammaan wararka adeegga.
Tallaabooyinka la raacayo si loogu noqdo tijaabiyaha Netflix waa kuwan soo socda:
Waxa ugu horreeya ee lagama maarmaanka ah waa in la aado xiriirka martiqaadka, tan u tag xidhiidhkan inaad gasho kooxda tijaabada beta
Isticmaal koontada Gmail ee aad ku isticmaaleyso Play Store si aad u gasho, waa lagama maarmaan in la isticmaalo isla hal
Dhagsii "Noqo tijaabiye" waxaadna toos u gali doontaa beta-ka
Netflix waxay toos ugu cusbooneysiisaa barnaamijka Beta si aad ugu hesho cusbooneysiintii ugu dambeysay abka
Haddii aad go'aansato sabab kasta oo aad uga baxeyso Beta waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda: Aad dhanka hoose ee ay ku qoran tahay "Waxaad tahay tijaabiyaha Beta" oo dhagsii farriinta oraneysa "Bax" si aad dib ugu hesho qaabka deggan telefoonkaaga Android
Ka mid ah wararkii ugu dambeeyay marwalba waxaa jiri doona xoogaa muhiim ah, ama menus dareen leh iyo qaar dheeri ah oo aad iskudaydo oo keliya wajiga Beta. Netflix, sida barnaamijyada kale, waxay cusbooneysiiyaan xilliyo si loo bixiyo khibrad adeegsi oo wanaagsan taasna waa u mahadcelinta bulshada, maadaama tijaabiyeyaashu ay muhiim yihiin in la isku dayo oo la arko waxa fashilmay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo tijaabiyo wararkii ugu dambeeyay ee Netflix: Noqo tijaabo
Waa hagaag. Waxaan iska diiwaangeliyey sidii tijaabo beta oo waxaan ku soo dejiyey barnaamijka Netflix taleefankayga gacanta. Waxaa loo rakibay si caadi ah, laakiin waa maxay furaha aan ku qoro. Albaabka laga galo waxaan dhigayaa e-maylkii aan ku qormay laakiin wuxuu i weydiinayaa lambar sir ah oo aan ku galo, markaa su’aashaydu waxay tahay: waa maxay furaha la galayo? Haddii aad i caawin kartid waan kuugu mahadnaqayaa si aan xad lahayn. Mahadsanid.
Martin wanaagsan, waxaan isticmaalay furaheyga sirta ah ee Play Store, wali iskuday inaad lasocoto si aad u ogaato inuu galayo, laga yaabee inaad sidoo kale ubaahantahay soo galitaanka Netflix
Sida looga saaro asalka sawir leh PhotoRoom